>Wireless Network Error in Windows XP | Myanmar Collection
← >အကောင်းဆုံး Install လုပ်နည်း
>ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် ဂမ်ဘီယာသမ္မတ နိုင်ငံတို့အကြားသံတမန်အဆက် အသွယ်ပြုလုပ် →
>Wireless Network Error in Windows XP
Wireless Network Error in Windows XP
မိမိတို့ သုံးနေတဲ့စက်မှာ Wireless Network ပါတဲ့သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်..
ပုံ(၁)မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Error တွေ့ရှိခဲ့ပါက ဖြေရှင်းရမယ့် နည်းလမ်းကလေးကို မျှဝေချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..။ အဲဒီ Error ဖြစ်တဲ့အ ချိန်တွေကတော့ မိမိသုံးနေတဲ့ Windows XP ကို update ပေးလိုက်တဲ့ အခါမျိုးတွေ မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Error– “Wireless cannot configure this wireless connection. If you have enabled another program to manage this wireless connection, use that software. If you want windows to configure this wireless connection, start the wireless zero configuration (WZC). For more information about starting the WZC service, see article 871122 in the Microsoft Knowledge Base on the microsoft.com website.”
အဆင့်(၁)။ Click Start, click Run, type %SystemRoot%\_system32\_services.msc /s, and then click OK.
အဆင့်(၂)။Wireless Zero Configuration အား Double-click ပေးပါ။
အဆင့်(၃)။ Startup type list တွင် Automatic အားရွေးချယ်ပါ။ ပြီးလျှင် Start Button အားနှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် မိမိစက်မှာဖမ်းမိနေတဲ့ Wireless Network တွေကို မြင်ရပါပြီခင်ဗျာ။အားလုံး အဆင်ပြေ ကြပါစေ။
ဒါမှ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ အောက်က Mediafire တွင် တင်ထားသော ဖိုင်းလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်သွားပါ .. ။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Fix This Problem = Mediafire
This entry was posted in Wireless Technology. Bookmark the permalink.